ရော်ဘာထုတ်ကုန်များ Vulcanizing Tank - တရုတ် Qingdao ပုံမှစက်
ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာရော်ဘာထုတ်ကုန် vulcanizing အကြံပေးအဖွဲ့အဓိကအားဖြင့်ရာဘာထုတ်ကုန် vulcanization ၏တင်နိုင်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါရော်ဘာထုတ်ကုန်ရော်ဘာ cable ကို, ရာဘာဖိနပ်, ရော်ဘာပိုက်, ရော်ဘာကြိတ်စက်, ကော်တိပ်, ရော်ဘာခါးပတ်, ရော်ဘာရေအဆို့, ရော်ဘာဘောလုံး, ရော်ဘာနံရံ, အဟောင်းကိုယာ retread, ပြန်ဖြစ်ရော်ဘာ desulphurization နှင့် SBR thermoplastic ဗဓေလသစ်နိုင်ပါတယ်; (kill) ဘက်တီးရီးယား, ကြိုး, လည်ဆံ, SoC ပပျောက်ဖို့ Anti-ချေး, Anti-ပုံပျက်သော impregnation ကုသမှု, အစားအစာနှင့်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 7000-40000
ရော်ဘာထုတ်ကုန် vulcanizing အကြံပေးအဖွဲ့ရော်ဘာထုတ်ကုန် vulcanization ၏တင်နိုင်ဘို့အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါရော်ဘာထုတ်ကုန်ရော်ဘာ cable ကို, ရာဘာဖိနပ်, ရော်ဘာပိုက်, ရော်ဘာကြိတ်စက်, ကော်တိပ်, ရော်ဘာခါးပတ်, ရော်ဘာရေအဆို့, ရော်ဘာဘောလုံး, ရော်ဘာနံရံ, အဟောင်းကိုယာ retread, ပြန်ဖြစ်ရော်ဘာ desulphurization နှင့် SBR thermoplastic ဗဓေလသစ်နိုင်ပါတယ်; ပပျောက်ရန် Anti-ချေး, Anti-ပုံပျက်သော impregnation ကုသမှု, အစားအစာနှင့်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ (သတ်ပစ်) ဘက်တီးရီးယား, ကြိုး, လည်ဆံ, အပူကျပုံစံ, ယဇ်ပူဇော်ထောင့်နှင့်အရိုးက high-ဖိအားပြုပြင်မွမ်းမံ, degreasing အမျိုးမျိုးအမွေးအတောင်များ Hydrolysis လူမီနီယမ်ထုတ်ကုန်ဓာတ်တိုး socks ။ ကာဗွန်ပစ္စည်းများ, ကျောက်ဂွမ်းပွတ်တိုက်မှုပစ္စည်းများ, gypsum နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ autoclave, ချက်ပြုတ်, နှစ်, ခြောက်သွေ့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါတယ်။ ရော်ဘာပြွန် vulcanizing အကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအယူအဆ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်း။ 1, အဆိုပါရော်ဘာ vulcanizer လူ့သဘောသဘာဝ! (နေရာတိုင်းမှာလိမ္မာပါးနပ်, လူများ-oriented ဒီဇိုင်းကိုထင်ဟပ်) 2, လုံခြုံရေး! (နှင့်အညီ: GB150-2011 "ဖိအားတန်ဆာကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ" ISO9001: 2008 အရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စနစ်, HACCP အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုလက်မှတ်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း) 3, အဆိုပါရော်ဘာ vulcanizer ယုံကြည်စိတ်ချရသောပါ! (ကမ္ဘာကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်ရေး) 4, အဆိုပါရော်ဘာ vulcanizer စွမ်းအင်ချွေတာရေးပါ! (အပူချိန်ဆုံးရှုံးမှု, လျှပ်စစ်မီး, ချုံ့လေ, optimization အတူလေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်၏အချိန်စားသုံးမှု) 5, ​​ရော်ဘာ Vulcanizer လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ဝတ္ထု, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ရိုးရှင်းသောပါ! က "စွမ်းရည်စည်းမျဉ်းများ" နှင့် GB150-98, GB151-98 အမျိုးသားရေးစံနှုန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလက်ခံမှု, အာမခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများသမာဓိရှိနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီရော်ဘာပြွန် vulcanizing အကြံပေးအဖွဲ့ဒီဇိုင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံထုတ်ကုန်များ၏တတိယအစိတ်အပိုင်း။
ရော်ဘာပြွန် vulcanizing အကြံပေးအဖွဲ့၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို။
အကြံပေးအဖွဲ့အချင်း / ပြွန်အရှည် / အပြည့်အဝစွမ်းရည် 1500 မီလီမီတာ / 3000mm / 5.3m3 ကုသ
အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား 0.8Mpa ဖြစ်ပါသည်
စုစုပေါင်း 64KW အကြောင်းကို၏ပါဝါကို install လုပ်ပြီး
Pot ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း Q345
အဆိုပါတင့်ကားကိုယ်ထည် 12mm ၏နံရံအထူ
* 1700 * 2000 Volume ကို 4200
အလေးချိန်အကြောင်းကို3တန်ချိန်
ပုဒ်မ6ကိုပျောက်ကင်းစေအကြံပေးအဖွဲ့အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးအဆောက်အဦ (အသုံးပြုသူပိုင်)
0.6m3 / မိနစ်: Air ကိုတွန်းကုတျ
ပုဒ်မ 7: vulcanization အကြံပေးအဖွဲ့၏လက်ခဏာ
◆အပူချိန် Anomaly နှိုးဆော်သံ။
◆အိုးများ၏ရမှတ်များအကြားအပူချိန်ကွာခြားချက် (အပူဖြန့်ဖြူး) 0.5 ℃±။
◆ Intelligent အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, ± 0.5 ℃အတွင်းအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်တိကျမှန်ကန်မှု။
ထိုကဲ့သို့သောရော်ဘာ, vulcanization, ပြန်ဖြစ်ရော်ဘာ desulfurization, SBR thermoplastic ပလပ်စတစ်အဖြစ်ရော်ဘာထုတ်ကုန်, ဝါးကာဗွန် degreasing, ရော်ဘာ, ရော်ဘာ, ရော်ဘာ, ရော်ဘာ, Wood ကမီး, ပိုးရွ, Anti-ချေး, Anti-ပုံပျက်သော impregnation, အစားအစာနှင့်စီးပွားဖြစ်တရုတ်ဆေးပညာပယ် (သတ်ပစ်) ဘက်တီးရီးယား။
ယခင်: သံမဏိစားနပ်ရိက္ခာစက်မှုဟင်းချက် Pot
နောက်တစ်ခု: သစ်သားသစ် Anticorrosive ကုသမှု Tank
ရော်ဘာ autoclave vulcanizer
ရော်ဘာ vulcanization autoclave
ရော်ဘာ vulcanizing လုပ်နိုင်တဲ့